/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Osimertinib (AZD-9291) ntụ ntụ
Rating: SKU: 1421373-65-0. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Usoro Molecular: C28H33N7O2
Molekụla arọ: 499.61
AZD-9291 ntụ ntụ (CAS 1421373-65-0) bụ naanị ọgwụ a kwadoro maka ndị ọrịa nwere mgbanwe EGFR T790M metastatic-nke na-abụghị obere cell cancer cancer. A kwadoro ihe ngosi a n'okpuru usoro nkwado nke FDA nke na-adabere na nzaghachi tumo na oge nzaghachi (DoR).
Cardiomyopathy mere na 1.4% wee nwụọ na 0.2% nke ndị ọrịa 813 TAGRISSO. Mpempe Eugent Ventricular Ejection (LVEF) jụrụ> 10% na dobe ka <50% mere na 2.4% nke (9/375) tagrisso ọrịa. chọpụta lvef tupu ibido na mgbe ọnwa atọ gachara. jigide ma ọ bụrụ na ọnụọgụ nke ejection mbelata site na 3% si pretreatment ụkpụrụ bụ ihe na-erughị 10%. n'ihi na obi mgbawa na-arịa ọrịa obi ma ọ bụ na-aga n'ihu na-adịghị arụ ọrụ n'ime izu 50, kwụsịchaa tagrisso kpamkpam.
Mmeghachi omume na-adịghị mma (> 20%) hụrụ na ndị ọrịa TAGRISSO bụ afọ ọsịsa (42%), ọkụ ọkụ (41%), akpụkpọ akọrọ (31%) na nsị ntu (25%).